Reer Dharkeynley oo dagaal ku waabariistay | KEYDMEDIA ONLINE
Reer Dharkeynley oo dagaal ku waabariistay
Waxaa saakay waabarigii ay hurdada kaga salaleen dadka Degan Degmada Dharkeynley oo gobalka Banaadir oo ka mid ah Degmooyinka Maamul ahaan loo xisaabo Dowlada daryanka hub culus oo halkaasi leysku weedaarsanayo.
Sida ay u sheegeen dadka deegaanka keydmedi.net dagaalka ayaa ka soo bilowday dhanka xoosh isagoona markii danbe ku soo siqay qeybaha kale ee degmada, waxaana labada dhan ee dagaalamaya ay adeegsanayeen hub inta ay heli karaan.
" Hub Culus ayaa dhacaya, Caruurta ayaana kula jirnaa gudaha guriga ma jirto waxaan kala socono Dagaalka, Salaadii Subax kadib ayuuna bilowday" sidaa waxaa Keydmedia.net u sheegtay Hooyo Aamino oo ka mid ah Dadka ku barakacay Degmadaasi.
Wararka laga helay Isbitaal Madiina oo ka mid ah Isbitaalada Muqdisho ayaa sheegay in ku dhawaad toban qof oo rayid ah misna qaba dhaawacyo kale duwan la gaarsiiyay isbitaalka.inkastoo dagaalka uu wali socdo
Dagaalka ayaa la tilmaamay inuu u dhaxeeyo Ciidamada dowlada iyo Xoogaga kale ee ka soo horjeeda, waxaana kol hore degmadan ka dhacay Dagaalo dhaxalkooda uu noqday dhibaato gaartay Shacabka .
Saadaq Joon oo gudaha u galay degaanka Camaara
Warar 2 August 2021 19:01
Ciidanka Galmudug iyo kuwa Xoogga Dalka ayaa saacado gudohood la wareegay fariisimo farabadan oo Al-Shabaab ku lahaayeen koofurta iyo bariga Gobolka Mudug.